जमराको जुस सञ्जीवनी हो – जागरण अनलाइन
२०७५ कार्तिक १५, बिहीबार १२:५३ मा प्रकाशित
तस्विर सौजन्य ः दुर्गालाल केसी
अग्र्यानिक जमरा जुस सञ्जीवनीका सञ्चालक
एलो पे थिक औ षधिको प्रयो गले कुनै न कुनै असर पर्छ भन्ने सबै मा छ । तर त्यसको विकल्प के भन्ने मा मानिसहरु खासै चिन्तन गदैर् नन् । तर विकसित समाजले त्यसको विकल्पमा आयुवेर्दिक औ षधिको प्रयो ग गर्न थाले को लामो समय भइसके को छ । त्यसै ले होला ने पाल र खासगरी दाङमा पनि अहिले आएर आयुवेर्दिक औ षधिको प्रयो गले बढावा पाइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा दाङको घो राहीमा जमराको जुसको व्यावसायिक उत्पादन थालिएको छ । त्यही मध्ये को एक हो घो राही उपमहानगरपालिका–१४ मिलनचोक शुक्रपथको अग्र्यानिक जमरा जुस सञ्जीवनी । स्थानीय अनिता बञ्जाडे र उहाका बुवा हरिप्रसाद बञ्जाडेले संयुक्तरुपमा सञ्चालनमा ल्याएको जुस उद्यो ग र जमराको जुसको फाइदाका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले उद्यो गका प्रो प्राइटर अनिता बञ्जाडे सग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
कस्तो छ जमराको जुसको व्यापार ?
भर्खरै शुरु गरिएको हो  । महिना दिनजति भयो हो ला जमराको जुसको व्यापार थाले को  । शुरुवात भए पनि राम्रै छ ।
व्यापार कसरी थाल्नु भो ?
एउटा न एउटा रो ग नलागे को को ही नि छै न । हरे क खानामा के मिकलहरु मिसिएका छन् । त्यस् ता विषादी खानामा मिसिएर हाम्रो शरीरमा जादा के ही न के ही समस्या सबै मा छ । सानो उमे रदे खि बुढौ लीहरुसम्म समस्या आइरहे को अवस्थामा म र घरमा बुवा आमालाई पनि ग्याष्ट्रिक, मो टो पन, को लेस्ट्रो लको समस्याले सताएको थियो  ।
त्यही भएर आयुवेर्दिक औ षधिको खो जी गदैर् जादा जमराको जुसले समस्या समाधान भएपछि के ही गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेर मे रो बुवा र म मिले र यसको व्यापारको थालनी गरे का छौ ं ।
दशै ंमा मात्रै जमरा लगाउने हाम्रो परम्परा थियो । अ ब यसलाई जुस बनाएर बाह्रै महिना खाने हो भने अने कौ ं रो गबाट मुक्ति मिल्छ भन्ने मिडियाबाट नै थाहा पाएर यसको व्यापारतिर लागे का हौ ं । म पनि समाजशास्त्रको विद्यार्थीका हिसावले दुई महिनासम्म यसकै बारे मा अनुसन्धान गरे र लागे को हौं।
तपाइसग के के को जमरा छ ?
मै ले गहु र जौ को जमराबाट शुरुवात गरे को छु । यसका विषयमा मै ले अलि धे रै बुझ्ने अवसर पाए । यी दुबै को जमराबाट बढी फाइदा रहे को पाएपछि शुरुवात पनि गहु र जौ बाट नै गरे को छु । यो राम्रो भयो भने आयुवेर्दिक क्षे त्रका एलो भे रालगायतका थुप्रै वस्तुको जुस बनाउने यो जना बनाएको छु ।
जमराको जुसको फाइदा खास के हो ?
फाइदाको कुरा गर्दा त यसको ५० बढी फाइदा छन् । जस् तो अहिले मानिसमा भएका रो गहरु सुगर, प्रे सर, थाइराइड, कोले ष्ट्रोल, माइग्रे न, ग्याष्ट्रिक, कव्जियत, पायल्स, क्यान्सर, अल्सर, महिनावारी अनियमित हुने , तल्लो पे ट दुख्ने , मुखमा चाया, पोतो , दुबीलगायत छालाको समस्याहरुको निदान, बुढौ लीपन कम गनेर् , रगत उत्पादन, खाना नपच्ने जस्ता ५० बढी रो ग र समस्याहरुको निदान गर्न यसले मद्दत गर्छ ।
यो विज्ञानसम्मत छ त ?
विज्ञानले पुष्टि गरे को कुरा नै हो यो  । विकसित दे शहरुमा धे रै वर्ष अघिदे खि यसको से वन गनेर् र रो गबाट मुक्ति पाउने काम भइरहे कै छ । जस्तो हामीले स्वस्थताका लागि हरियो सागलगायत तरकारी, फलफूल खान्छांै  । जमरामा हरियो पन त धे रै छ । वै ज्ञानिकहरुले पुष्टि गरे को कुरा चाहि के हो भने कमलो बिरुवामा भिटामिन, मिनिरल्सहरु धे रै पाइन्छन् र यसले मानिसलाई धे रै फाइदा गर्छ भन्ने हो  । जौं भन्दा पनि गहुमा भिटामिन र मिनिरल्सहरुको मात्रा धे रै भएकाले नियमितरुपमा से वन गर्दा रो गहरु निर्मूल भएको उदाहरण जति पनि छन् ।
यहाबाट जुस खाने हरु कति हुनुहुन्छ ?
शुरुवातमा ३० जनाले नियमित खानुहुन्छ । त्यसमा पाचजना जति क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्छ । मै ले यो एक महिनाकै रिजल्ट हे र्दा युरिक एसिड, ग्याष्ट्रिक, छाती पो ल्ने , पिसाव पो ल्ने , कव्जियत, पायल्सलगायतका समस्या समाधान भएको पाएको छु ।
कति समयसम्म खानुपर्छ रो गीले ?
हामीले खानाको नाममा धे रै के मिकलहरु खाएका छौ ं । कुनै न कुनै खानाबाट हामीले हाम्रो शरीरमा विषादी हाले का छौ ं । ती विषाक्त वस्तुलाई निकाल्नका लागि के ही समय लागि हाल्छ । तुरुन्ता तुरुन्तै निको हुने हुदै न । जादू गरे जस्तो यसले हुदै न । कडा खालका बिरामीबाहे क अरुले कम्तिमा तीन महिना नियमित जमराको जुस से वन गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर दीर्घखालका क्यान्सर, किड्नीको समस्या भएका मान्छे हरुले सञ्चो नहुदासम्म खाइरहनुपर्छ । सामान्यतया एक महिना नियमित खाने हरुले त्यसको सकारात्मक लक्षण पाइहाल्छन् ।
सबै खाले रो गीहरुलाई जमराको जुस उपयुक्त दे खियो ?
हो  । सबै का लागि यो उपयो गी नै छ । जांै को तुलनामा गहु“को जमराको जुस अझ धे रै उपयो गी छ । नर्मल प्रे सर भएको मान्छे ले लगातार जौ को जुस खानुभयो भने लो गराउ“छ । यसले गर्दा समस् या आयो भन्ने हिसावले बुझ्नुहुन्छ । हाम्रो परम्परा कस्तो छ भने जौ को सातु खाने वा अन्य काममा पनि जौ नै लगाइन्छ । त्यसै ले मान्छे लाई जमराको जुस भन्दा बित्तिकै जौ कै खानुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसो हो इन गहु“को जुसबाट अझ धे रै फाइदा हुन्छ ।
असर पनि हुन्छ उसो भए ?
सुगर, प्रे सर, थाइराइड भएकालाई जौ कै ठीक हुन्छ । कहिले काहीं मिसाएर खाए पनि हुन्छ । गहुको असर त के ही पनि छै न । तर जौ को जुसले तितो हुने भएकाले नियमित से वनले प्रे सर लो हुनसक्छ । गहुको गुलियो हुने भएकाले सुगर लागे काले म त खा“दै न भन्ने हो ला त्यसले कुनै असर पादैर्न ।
जुसको मात्रा हुदै न ?
जुसको साधारण मात्रा भने को ३० मिलिलिटर हो  । तर साना उमे रका मान्छे लाई उमे र अनुसार ५ एमएलसम्म खुवाउन सकिन्छ । तर क्यान्सर, किड्नीमा समस् या भएका बिरामीहरुले दिनको दुई पटक ३० एमएलका दरले खानु उपयुक्त हुन्छ । बच्चाहरुलाई नियमित खुवाउदा स्मरण शक्तिको बृद्धि हुन्छ । तर उमे र अनुसार सानो भए ५ एमएल १०–१५ वर्ष उमे रका वच्चाहरुलाई २० दे खि २५ एमएलसम्म खुवाउदा फाइदा हुन्छ । बच्चाहरुलाई ३० एमएल खुवाउदा प्रो टिन धे रै भएर पचाउन गाह्रो हुन्छ ।
से वा शुल्क कति छ ?
मे रो अग्र्यानिक उत्पादन हो  । जमरा उत्पादन गर्न प्रयो ग हुने माटो पनि मै ले खे ती नहुने जंगल वा नर्सरीबाट ल्याएको छु । किनभने खे ती गरिरहे को ठाउबाट माटो ल्याउदा हामीले बाली उत्पादनका लागि गो वर नपुगे र रासायनिक मल हाल्छौ ं । रो ग कीरा मार्न विषादीको प्रयो ग गछौर् ं । त्यसो भएर शुद्ध माटो को प्रयो गले मात्रै अग्र्यानिक जमरा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने र यसो गरे को हु । खासगरी बीउ पनि मै ले विषादी प्रयो ग गनेर् क्षे त्रको ल्याउदै न । जौ , गहु पनि रो ल्पा, प्युठानजस् ता पहाडबाट ल्याएर जमरा उत्पादन गरे को हुनाले मे हनत र खर्च पनि अलि बढी लागे को छ । हुन त काठमाडौ ंलगायत अन्य क्षे त्रमा अग्र्यानिक जुसलाई एक सय २५ भन्छन् । मै ले एक डो जको एक सय रुपैया लिने गरे को छु ।
महंगो भएन र ?
जुस लिदा जम्मा ३० एमएल दे खिन्छ । तर त्यसको पछिको मे हनत र लगानी धे रै हुन्छ । त्यो दे खिदै न । हस् िपटलमा रगत परीक्षण गर्दा चाहि ५ सय दिन तयार हुन्छौ ं । त्यही रगत बृद्धि गनेर् र शुद्धिकरण गनेर् जुसलाई एकसय तिर्न महंगो भन्छौ ं । कहिले काहीं खाने लाई हिसाव गर्दा महिनामा तीन हजार जस् तो हुन आउछ तर नियमित ग्राहकलाई हामीले दुई हजार आठ सयमा खुवाइरहे का छौ ं ।
जमरा त सबै को घरमा उत्पादन हुन्छ, जुस बनाउन सकिन्छ ?
सकिन्छ, तर व्यावसायिक जस्तो अग्र्यानिक बनाउन गाह्रो छ । किनभने मै ले भनिहाले ं माटो को प्रयो ग रासायनिक मलको प्रयो ग गरिएको बारी वा खेतको ल्यायो भने अग्र्यानिक उत्पादन हुदै न । जमरा पहे ंलो भनिन्छ तर यहा हरियो जमरा उत्पादन गनेर् हो  । दशै ंमा लगाउने जमराजस्तो हो इन । अध्यारो को ठामा राख्दा के गनेर् , उज्यालो मा राख्दा के गनेर् भन्ने नियम छ । सो च्दा दशै ंको जमराजस्तो भए पनि ठ्याक्कै हो इन, अलिकति फरक विधि छ ।
तपाइहरुसग कति क्षमता छ ?
अहिले हामीले एकसय क्यारे ट उत्पादन गरिरहे का छौ ं ।
छुटे को कुरा के ही छन् की ?
भर्खरै शुरुवात गरे को छु । के ही न के ही समस्या त छ । व्यापार गर्न त दुई चार लाख लगानी गरे र अरु के ही पनि गर्न सकिन्थ्यो तर मलाई यो से वा पनि हो जस्तो लागे र जमराको जुस उत्पादन गनेर् व्यापार थाले को हु । यसमा मलाई मेरो बुवाले साथ दिनुभएको छ । थो रै लगानीमा केही सेवा र घर खर्च पनि आओ स् भन्ने हिसाबले व्यवसाय शुरु गरिएको हो  । यो व्यापार भन्दा पनि मानिसको दीर्घायुका लागि हो  । मे रो दृष्टिको णबाट हे र्दा तपाइहरुलाई व्यापार जस्तो लाग्ला, तर जमराको जुस सञ्जीवनी हो  ।
सडक विस्तार नै पहिलो प्राथमिकताः वडाध्यक्ष बुढा २०७५ कार्तिक १५, बिहीबार १२:५३
सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुु¥याउने अभियानमा छौं २०७५ कार्तिक १५, बिहीबार १२:५३
सहकारी समृद्धिको आधार हो २०७५ कार्तिक १५, बिहीबार १२:५३